Thursday January 10, 2019 - 13:54:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Yemen ayaa sheegaya in weerar khasaara lixaad leh dhaliyay lagu qaaday mid kamida saldhigyada Melleteri ee wadankasi ugu weyn.
Diyaarado nuuca aan duuliyaha laheyn ah ee Drone-ka loo yaqaan ayaa duqeeyay saldhigga Alcandi ee dhaca Koonfurta wadanka Yemen, xilligii ay duqeyntu dhacaysay ayay xaflad melleteri ka socotay gudaha saldhigga waxaana madasha ku sugnaa mas'uuliyiinta ugu sarraysa melleteriga xukuumadda Yemen.
Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa war ay soo saareen ku sheegay in diyaaro aan duuliye laheyn ku weerareen saldhig melleteri oo laga maleegayay wax ay ugu yeereen dhagarta ka dhanka ah shacabka Yemen ayna dileen askar iyo saraakiil katirsan ciidamada xukuumadda Yemen.
Dadka ku dhaawacmay weerarkii maanta waxaa kamid ah guddoomiyihii gobolka Laxaj, taliyaha sirdoonka ninka lagu magacaabo Max'med Saalix iyo Jeneraal Cabdullaahi Saalix Alnakhaci oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada xukuumadda dabadhilifka Yemen.
Goob joogayaal ku sugnaa goobta xafladda melleteri ka dhacaysay ayaa sheegay in diyaarado aan duuliye laheyn ay saldhigga ku dul haadeen kadibna ay walxaha qarxa la eegteen Minbarkii ay xafladu ka socotay oo xilligaas ay khudbado ka jeedinayeen saraakiil melleteri iyo guddoomiyaha gobolka Laxaj.
Sawirro lagu faafiyay baraha bulshadu kuwada xiriirto ayaa muujinayay dhiig ku qubanaya saldhigga iyo dhaawacyo laga daad gureynayo goobta, maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee xiriirka laleh dowladda shiicada iiraan ayaa hormariyay qaab dagaaleedkooda iyagoo adeegsanaya diyaarado aan cidna wadin oo ay ku xiranyihiin Bambaanooyin casri ah.